Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0913 lak
Lesona 09 : Andron'i Jehovah (Zefania)
25 - 31 Mai 2013
Ny famalian'Andriamanitra ny tsy rariny
Alakamisy 30 May
Vakio ny Nah. 1–3. Inona ireo andininy mampianatra antsika amin’ny fomba manokana ny toetran’Andriamanitra? Fomba ahoana no ampiharantsika ny zavatra hita eto, amin’ny fahazoantsika ireo toe-javatra hiseho amin’ny andro farany?
Ny tenin’Andriamanitra ho an’ireo mpanjakan’izao tontolo izao, izay aseho amin’ny alalan’i Ninive, no faminaniana nentin’i Nahoma. Rehefa mijery ity tontolo ity i Nahoma dia nahita ny tanan’Andriamanitra manohitra ny fanjakan’ny Asirianina. Nolazainy fa ny renivohitr’ity tanàna ity - i Ninive izany - dia ho rava tsy ho ela intsony, ary tsy ho tafarina mandrakizay. Tena niteny tamim-pahatokiana tokoa i Nahoma satria fantany ny toetran’Andrimanitra. Tamin’ny alalan’ny fanomezam-pahasoavan’ny faminaniana (Nah. 1:1) no nanehoan’Andriamanitra taminy ny zavatra hitranga. Tsy avelan’Andriamanitra tsy ho voaheloka ireo meloka (Nah. 1:3; Eks. 34:6,7).
Nambabo firenena maro ny Asirianina ary tena liam-pahefana tokoa. Tena fanta-daza tokoa ny habibian’izy ireo. Amin’ny maha-“harezan”’Andriamanitra (Isa. 7:20) azy, dia noharatany haingana dia haingana avokoa ireo mpifanolobodirindrina aminy. Ankehitriny kosa dia hopotehina ilay hareza. Tsy afa-miala amin’ny fitsaran’Andriamanitra ihany koa mantsy ireo fitaovana nampiasainy tamin’ny fitsarany. Tsy misy intsony i Ninive, fa ny fanambaran’ny faminaniana kosa dia mbola velona. Mampahatsiahy antsika izany fa na dia toa ela aza ny fitsaran’Andriamanitra, amin’ny farany kosa dia tsy hisy hahatohitra izany.
Araka ny hitantsika tany amin’ny lesona teo aloha, taona vitsivitsy talohan’i Nahoma, dia tsy noravan’Andriamanitra ny tanànan’ireo Ninivita rehefa nandre ny toritenin’i Jônà izy ireo ka nibebaka. Tsy naharitra ela anefa izany fibebahana izany fa niverina tamin’ny fanaony teo aloha indray ny olona. Azo antoka fa maro tamin’ireo firenena nampitondrain’i Ninive zioga mavesatra no nandray ny vaovao momba ny faharavany tamin’ny fihobiana sy ny fifaliana tokoa. Hisy mpitondra hafatra hanambara vaovao mahafaly (Isa. 52:7) hoe ho tapatapaka ny herin’i Asiria sy ny andriamaniny. Afaka miankohoka Aminy amim-pilaminana indray ny vahoakan’Andriamanitra (Nah. 1:15).
Arakaraky ny maha-lehibe ny fahatezeran’Andriamanitra no maha-mamy ny famindrampony. Miaro ireo izay miandry ny fahafenoan’ny fahatsarany Izy. Mampianatra i Nahoma fa miahy ireo izay matoky Azy Jehôvah, fa amin’ny riaka manafotra kosa no anenjehany ny fahavalony ho any amin’ny maizina (Nah. 1:8). Tao ambadik’izany rehetra izany Andriamanitra satria efa nambarany fa tsy ho ela intsony ny fitsarana an’i Ninive.
Asehon’i Nahoma mpaminany eto fa manana hery lehibe Andriamanitra. Mangovitra eo anatrehany ny voary rehetra. Tsy hamela ny hisian’ny fahotana mandrakizay Izy. Etsy ankilan’izany anefa dia Mpamonjy ho an’ireo izay matoky Azy Izy. Araka izany dia tsy misy toerana eo anelanelan’ireo. Na isika miandany amin’ny ankilany na isika miandany amin’ny andaniny. “Izay tsy miray amiko,” hoy i Jesôsy, “dia manohitra Ahy.” (Mat. 12:30).